ग्यापमा फिल्म वा राम्रो फिल्म – Mero Film
ग्यापमा फिल्म वा राम्रो फिल्म
२०७६ जेठ १३ गते २१:०८
क्याप्टेन फिल्म रिलिज भएपछि १ महिना १३ दिनपछि अनमोल केसीले नै अभिनय गरेको ए मेरो हजुर ३ फिल्म चलेको थियो । क्याप्टेनको बेलामा नै अनमोललाई किन यति छोटो समयमा नै फिल्म खेल्नुभयो भनेर संचारकर्मीले प्रश्न सोधेका थिए ।
अनमोलले समय छोटो भएपनि आफूले फरक बिषयमा फिल्म खेलेको भनेर जवाफ दिएका थिए । क्याप्टेन फिल्म रिलिज हुँदा अनमोलको कृ रिलिज भएको १३ महिना भएको थियो । ए मेरो हजुर ३ रिलिज हुँदा क्याप्टेन रिलिज भएको १ महिना १३ दिन भएको थियो ।
तर, अनमोल केसीको ए मेरो हजुर ३ ले क्याप्टेनको व्यापार भन्दा दोब्बर व्यापार गरेको हो । दोब्बर व्यापार गर्दा अनमोल केसीलाई खस्किन थाले भनेर आलोचना गरिररहेका आलोचकको मुख थुन्न सजिलो भएको छ ।
कलाकार भएपछि ग्याप लिन पर्छ । लगालग फिल्म आउँदा दर्शकमा कलाकारलाई हुने उत्सुकता हुदैन भनेर भन्छन् । यो कुरालाई राम्रो मान्नपर्छ ।
तर, ग्याप लिएर मात्र हुन्छ । २ बर्ष ग्याप लिएर अनमोल केसीले नै खेलेको कृले निर्मातालाई फाइदा दिएको थिएन । कृले अनमोल केसीलाई पनि फाइदा दिएको थिएन ।
अभिनेता पल शाहले १३ महिना ग्याप लिएर विर विक्रम २ खेलेका थिए । विर विक्रम २ बाट पललाई के फाइदा भयो त खै ? पल शाहको अभिनय पनि सुधारिएन । उनी, शुत्र गतेमा छोड्दा जस्तो थिए, उस्तै त भए । विर विक्रम २ खेलेर पल शाहले के उपलब्धी गरे ? १३ महिना फिल्म नआउँदा उनले के सिके ? नयाँ प्रयोग केही पनि गरेनन् ।
अभिनेता विपिन कार्कीले प्रसादमा, हरिमा तारिफ पाए । गोपीमा आउँदा उनको तारिफ कम भयो । हरी चलेन, प्रसाद राम्रो नै चलेको मान्नपर्छ ।
गोपीपछि जात्रै जात्रा चल्यो । फिल्म पनि चल्यो, विपिनको अभिनय पनि चलेको छ । विपिनको ४ वटा फिल्म आएका छन्, लगालग । दर्शकले राम्रो फिल्म हेरेका छन् ।
कलाकार सस्तो हुन हुँदैन । महिना वित्न नपाउँदै फिल्ममा देखिन पनि हुँदैन । तर, ग्याप लिएर नराम्रो कथा रोज्न पनि हुँदैन । राम्रो कथामा फिल्म खेल्दा बर्षमा २ पटक आउँदा पनि कुनै फरक नपर्ने उदाहरण देखिसकेका छन् ।
अहिले आएका अभिनेता, अभिनेत्री ग्यापमा बस्न रुचाउँछन् । यसलाई उनीहरुको पर्खन सक्ने खुबी मानौ । तर, ग्यापमा बस्नु मात्र ठूलो सोचाई होइन । फिल्म रोज्दा पनि ग्याप गरेर आउनुको अर्थ पुष्टी गरिदिए राम्रो हुन्छ ।
नेपाली फिल्ममा कथा बुन्न जानेका निर्देशक नभएर होलान् कि, फिल्म रोज्न नजानेका कलाकार भएर होलान् । कलाकार दर्शकलाई प्रतिक्षा गराउँछन् । तर, आएपछि हिस्स बनाउँछन् । ग्याप आवश्यक हो । तर, कथा राम्रो छान्नु पनि आवश्यक हो ।